Actorylọ ọrụ gas na-enye gas, ndị na-eweta ya - China na-emepụta gas na-emepụta gas
50NG / 50NGS Natural gas Generator Set Main nhazi na atụmatụ: • Ukwuu oru oma gas engine. & AC synchronous onye ọzọ. • safetygbọ okporo ígwè nchekwa gas na ngwaọrụ nchedo gas na ịpụpụ. • sistemu na-eme ka ahụ dị mma maka ọnọdụ okpomọkụ ruo 50 ℃. • Nnwale ụlọ ahịa siri ike maka gens niile. • Industrial silencer na silencing ikike nke 12-20dB (A). • sistemụ nchịkwa dị elu: sistemu njikwa ECI gụnyere: sistemụ mgbanye ọkụ, sistemụ njikwa ngwa ngwa, usoro njikwa ọsọ, nchebe ...
50NG / 50NGS Natural gas Generator Set Main nhazi na atụmatụ: • Ukwuu oru oma gas engine. • AC synchronous alternator. • safetygbọ nchebe nchekwa na ngwaọrụ nchebe gas na-egbochi mmiri mgbapụta. • Sistemụ jụrụ oyi dị mma maka ọnọdụ ihu igwe ruru 50 ℃. • Nnwale ule ụlọ ahịa maka ihe niile. • silencer nke ụlọ ọrụ na-eme mkpọtụ nke 12-20dB (A). • Advanced engine control system: ECI control system including: mgbanye sistemu, detonation akara usoro, ọsọ akara usoro, nchedo syste ...
80NG / 80NGS Gas gas jikọtara nhazi nhazi na njiri mara: • Injin gas dị elu. & AC synchronous onye ọzọ. • safetygbọ okporo ígwè nchekwa gas na ngwaọrụ nchedo gas na ịpụpụ. • sistemu na-eme ka ahụ dị mma maka ọnọdụ okpomọkụ ruo 50 ℃. • Nnwale ụlọ ahịa siri ike maka gens niile. • Industrial silencer na silencing ikike nke 12-20dB (A). • sistemụ nchịkwa dị elu: sistemu njikwa ECI gụnyere: sistemụ mgbanye ọkụ, sistemụ njikwa ngwa ngwa, usoro njikwa ọsọ, nchebe ...
Ihe omuma a na-egosi na ihe ndi ozo bu nke oma nke 10 kWh / Nm³ na methane no. > 90% 2. Teknụzụ sitere na teknụzụ sitere na biogas na ọnụ ahịa kalori nke 6 kWh / Nm³ na methane no. > 60%
Injin gas na-arụ ọrụ nke ukwuu. & AC synchronous onye ọzọ. Traingbọ nchebe nchekwa na ngwaọrụ nchebe gas na-egbochi mmiri mgbapụta. Igwe jụrụ oyi kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ ikuku dị 50 ℃.
Injin gas na-arụ ọrụ nke ukwuu. & AC synchronous onye ọzọ. Traingbọ nchebe nchekwa na ngwaọrụ nchebe gas na-egbochi mmiri mgbapụta.
Injin gas na-arụ ọrụ nke ukwuu. Ihe atụ AC synchronous. Traingbọ nchebe nchekwa na ngwaọrụ nchebe gas na-egbochi mmiri mgbapụta.
Dizel Generator Na Kubota Injin, 240kw Generator, Ahịa Dizel Generator, Obere Generator, Ego njikwa, Ahịa Generator ji arụ ọrụ,